အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အနီရောင် ပဟေဠိနှင်းဆီ
40 Responses to “အနီရောင် ပဟေဠိနှင်းဆီ”
ကြိုက်တယ် ချောရေ...း))
ချောချော .....ရော test လုပ်ဖူးပြီလားးးးးးးးးး
နှင်းဆီပန်းလေး ယူပြီး သွားမှ ဟိုမှာ ပွင့်နဲ့တိုးနေဦးမယ်...... ဟိးဟီး
နောက်တာပါ အစ်မချော။ သေသေချာချာဖတ်သွားပါတယ်ဗျား
အဲဒီလိုခပ်ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းမျိုးလေး ဖတ်ဖူးတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ အဒေါ်ကြီးမဟုတ်ဘဲ မိန်းကလေးဖြစ်နေတာ ... ။ တကယ်တော့ အဲလို မစမ်းသပ်ကောင်းဘူး ထင်တာပဲ။
ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တဲ့ happy ending လေး..
(ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသက် ၄၀ ကျော် အမျိုးသမီးသာ တကယ်ဖြစ်နေရင် ညနေစာ တစ်နပ်လောက်ပဲ ကျွေးမှာ မဟုတ်လား.. ချစ်သူ ဖြစ်ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ..)
အရမ်းကိုအဆုံးသတ်လှတဲ့ ဇတ်လမ်းလေးပါလားမမရေ ..
ဟာ မိုက်တယ်ချောရေ။ တကယ်မိုက်တယ်။ ဘုန်းဘုန်းလည်း British Council မှာ အဖွဲ့ဝင်ထားတယ်။ သင်တန်းတော့ မတက်ပါဘူး။ ငွေမတတ်နိုင်လို့။ စာအုပ်လေးငှားတာ၊ သွားဖတ်တာလောက်ပဲ လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီနေ့လည်း သွားရဦးမယ်။ စာအုပ်သွားပို့ရဦးမယ်။ သွားပို့မယ့် စာအုပ်ထဲမှာ ဘုန်းဘုန်းလိပ်စာနဲ့နာမည်လေးတွေ ရေးထားဦးမယ် ထင်တယ်။ ဟိ။ ခြေသလုံးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ တိုးရင်တော့...........ဟီး။
ဇာတ်လမ်းတိုင်း အဆုံးသတ်လေးကို ကြည်ကြည်နူးနူးလေးနဲ့ အဆုံးသတ်တာပဲ နှစ်သက်တယ် ချောရေ။
ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်သွားပြီနော် ကျေးဇူးပါ။
ဟို အမျိုးသမီး ကြီးကို
အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ အမေ ထင်နေတာ ..း))
အိုးးး လှလှပပလေးကို ပညာပြသွားတာပါပဲရှင်။ အရမ်းကို လှပတဲ့ အလှည့်လေးနဲ့ ချစ်ပုံပြင်လေးမို့ အလွန်ပဲ နှစ်သက်မိပါတယ်မချောရေ။
ပထမတော့ လွဲပြီလို့ ထင်နေပေမယ့် ကောင်မလေးရဲ့ အလှကို စာရေးဆရာက ဒီလောက် သေသေချာချာ ဖွဲ့နွဲ့ ထားမှတော့ သူပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ တွေးမိလိုက်တယ်၊ အဲဒီလို ဇတ်လမ်းမျိုးဆန်ဆန် မြန်မာ ဝတ္ထုတိုလေး တစ်ပုဒ်လည်း ဖတ်ဖူးတယ်၊ အလှည့်လေး ထည့်ထားတဲ့ ပျော်စရာ ဇတ်သိမ်းလေး ပါပဲ...။း)
အမရေ ဇာတ်လမ်းလေးက တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်
အခုခေတ်စားနေတဲ့ chatting လောကနဲ့
ဖူးစာမှန်ရင်တော့ ပေါင်းကြရစမြဲပါရှင်း)
ကိုယ့်ဆီမှာ ချောရဲ့ ပိုစ့်အသစ်လင့်ခ်ကလေး မပေါ်ပါလားကွာ။ အသစ်တင်မတင် တွေ့တာနဲ့ လာဖတ်နေကျကို။ အသစ် ဘာလို့ ဒီနေ့မတင်တာပါလိမ့်လို့ လာချောင်းရင်း တွေ့တာကွ။ ဖတ်သွားတယ်။ happy ending လေးကိုလည်း သဘောကျသွားပါတယ်။ အဲလိုတော့ test မလုပ်ချင်ပေါင်ကွယ်။း)
အင်းးး အဲဒါတွေကြောင့် လူမမြင်ဖူးဘဲ အသံလေးကြောင့်၊ စာလေးတစ်ကြောင်းကြောင့် ချစ်မိတာတွေကို ကြောက်ရတာပေါ့။ အို စိတ်ဟာ ဆန်းကြယ်ပါတယ်လေ၊ အချစ်စိတ်ဟာ ပိုလို့ဆန်းကြယ်သေး၊ တော်ပြီအေ အပျိုဂျီးပဲ လုပ်တော့မယ် ခွိ ခွိ :)
ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အသိမ်းလေးနဲ့ သိမ်းထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့။
ဒီစမ်းသပ်နည်းက နည်းနည်းတော့ tricky ဖြစ်သလိုပဲနော်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်တဲ့ ပိုစ်ကလေးပါဘဲ ခင်ဗျာ။
အနီရောင် ပဟေဠိနှင်းဆီ ..
တစ်ကယ့် ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်အဖြေ လေးပါပဲ..
ဇာတ်လမ်းလေးက ကြည်းနူးဖို့ ကောင်းတယ်။
သိင်္ဂါကျော် ပြောထားသလိုပဲ တွေးမိတယ်.. ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ စမ်းသပ်မှုလေးတစ်ခုပါ..
ယောက်ျားလေးတွေ အမြင်နဲ့ အလှကို အဓိက ထားသလိုပဲနော်..ကောင်မလေးသာ ရုပ်ဆိုးနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..နော်
ဒါပေမယ့် အမကြီးတော့ အဲလိုမစမ်းနဲ့နော်းး)။
အရှင်ဘုရား နည်းနည်းများနေတယ် ထင်တယ်
ဒါပေမဲ့ မချော အဖွဲ့အနွဲ့မှာ ဖတ်လို့ကောင်းကောင်းနဲ့ မြောပါသွားပါတယ်။
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် အစ်မ ...
အဆုံးသတ်လေး လှတော့ ပျော်စရာကောင်းတယ်
ကြိုက်တယ် မချောရေ...ကောင်လေးရဲ့ယဉ်ကျေးလိမ္မာမူက ကယ်သွားတာကလား..တကယ်လို့ များ စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီး အစိမ်းရောင်ကောင်မချောလေးနောက်လိုက်မိရင်ဖြင့်...တန်..ဒန့်...ဒန်
ကောမန့်က များသွားပြီ ချွေးမလေးရေ
ဖျက်လိုက်ပါအုံးကွယ် ငှဲ ငှဲ ငှဲ :P
ယောက်ကျားပီသပြီး လူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့ သူ့ အပြုအမူကြောင့် ပြန်ရလိုက်တဲ့ ဆုလာဒ်တစ်ခုပေါ့....
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် မချောရေ...
အဲဒီ အန်တီကြီးပါ တခါတည်း ဖိတ်ကျွေးလိုက် ... ဟာ ! မဖြစ်ဘူး။ အကြောင်းစုံသိသွားတဲ့ အန်တီကြီးမှာ သမီးချောတွေ ရှိရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ ?
:P.. ကံကောင်းသွားတာပေါ့.... နို့မုတ်ရင်တော့... :P
တစ်ဘက်လူရဲ့ စိတ်ကို စမ်းသပ်လိုက်တာပေါ့...။
အဆုံးသတ် အလှည့်လေးကို သဘောကျမိတယ်...။
စာဖတ်သူ ကျေနပ်မှုရသွားစေတဲ့ အလှည့်လေး..။
အဲလိုလေး ဖြစ်လို့ တော်ပါသေးရဲ့ :D
ကောင်မလေးက အဲဒီ ခြေသလုံးတုတ်တုတ်နဲ့ အမျိုးသမီးကြီး ဖြစ်လိုက်ရမှာ။ ရေတပ်ဗိုလ်ကလေး ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ ကြည့်ချင်လို့။း)))
ဒီဝတ်ထုကိုတက်တိုးရဲ့ချစ်တေးကဗျာနှင့်အခြားဘာသာပြန်ဝတ္တုတိုများမှာအချစ်စမ်းချင်စမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးထားပါတယ်၊မူ၇င်းေ၇းသူ S.J.Kishor၊ မူ၇င်းဝတ်ထု Appointment with loveလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်၊စာဝင်ဖတ်နေ၇င်းဖတ်ဖူးသလို၇ှိတာနဲ့ပြန်၇ှာကြည့်လိုက်လို့သိလိုက်တာလေးပြောပြတာပါဗျာ၊
ဟုတ်ကဲ့ မူရင်းရေးသူနာမည်လေး ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...
မိုက်တယ် ..း))